IINDAWO ZEMICIMBI YOMTSHATO E-13 EMAZANTSI ECALIFORNIA - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Iindibano zomtshato ezili-13 kuMazantsi eCalifornia eziya kuthabatha umoya wakho
Iindibano zomtshato ezili-13 kuMazantsi eCalifornia eziya kuthabatha umoya wakho
Iifoto zakho zomtshato ziya kujongeka ngokuthe ngqo ngaphandle kwentsomi. Ngonaphakade & Njalo Soloko Ukuhlaziywa ngoJuni 14, 2021
Ukuba ubuphupha ngendawo efanelekileyo yokubamba umsitho womtshato wakho, ungakhange ujonge ngaphandle kwelanga laseMazantsi e-California. Kuninzi ukuthanda malunga ne-SoCal ukusuka eSanta Monica pier ukuya kwiikhosi ezininzi zegalufa zePalm Springs, kulonwabo olonwabisayo losapho lweDisneyland, iKnott's Berry Farm, kunye neUniversal Studios Hollywood. Kodwa iindawo zokuzonwabisa ezonwabisayo ayizizo zodwa izinto ezenza iSoCal ibe yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuba nomtshato oya kuyo.
Umazantsi eCarlifonia likhaya lezinto ezinqabileyo ezininzi. Nokuba ujonga indawo ekhawulezayo, engenangxabano, kodwa entle njenge-Albertson Chapel eLos Angeles, okanye indawo enembali efana ne-Leo Carrillo Ranch eCarlsbad, iGolden State inento kuwo wonke umntu. Ukungathethi, imozulu iphantse yagqibelela unyaka wonke. Iifoto zakho zomtshato ziqinisekisiwe ukuba ziyamangalisa. Jonga i-Knot ukuze ufumane ezinye zeendawo ezilungileyo zomtshato ukubhiyozela usuku lwakho olukhulu. Ukucwangciswa komtshato akuzange kube lula. Ngale nto ithethwayo, Nazi iindawo ezilishumi elinesihlanu zomtshato ezintle eSouthern California.
IMarquis eMurrieta, eCalifornia
UMTSHATO yindawo endala yomyezo womyezo womtshato
IMarquis, i-Old World Garden Estate Estate, ikweyure enye kumantla eSan Diego, hayi kude kakhulu nelizwe leTemecula. Ziihektare ezintlanu ezizele ziindawo ezithandekayo ezinjengeBhulorho yase-Italiya eyenziwe ngesandla okanye ii-Oaks kunye neeGadi, ezibonisa izakhelo zemithi ye-oki eneminyaka engama-250 kunye nendlela elityebileyo. Endaweni yeholo eliqhelekileyo lesidlo, iMarquis inegreenhouse yeediliya, enokusetyenziselwa isidlo sakho sokuziqhelanisa okanye indawo yolwamkelo.
I-Spa yezeMpilo zeCal-A-Vie eVista, eCalifornia
I-Spa yezeMpilo zeCal-A-Vie
I-spa yezempilo ayinakuba yindawo yomsitho womtshato onawo engqondweni, kodwa iSal-A-Vie Health Spa kufanelekile ukuba ijongeke. Ifumaneka eVista, CA, le ndawo yomtshato ithembisa amava abo kunye neendwendwe zakho zomtshato. Ukucwangciswa komtshato kunokuba noxinzelelo olukhulu, ke uCal-A-Vie ufuna ukukukhathalela yonke into kunye namava omtshato eentsuku ezintathu. Wena kunye neendwendwe ezili-120 ziya kuba nokufikelela ngasese kwiindawo zokungcebeleka, iiklasi zokuzilolonga okungenamda kunye nemisebenzi yeqela oyithandayo, kunye nonyango lwe-spa yemihla ngemihla. Ngapha koko, unokukhetha ukuba nomsitho kwicawa yaseFrance okanye kwiNdlu yeParish, ezazingeniswe zivela eFrance, i-5,000 yeenyawo ezinyawo ezenziwe ngotshani, okanye i-windmill.
I-Camarillo Ranch eCamarillo, eCalifornia
ICamarillo Ranch eVentura county 'kulapho i-rustic charm idibana khona nobungangamsha baseVictorian.' Le fama yenkulungwane ye-19 yinxalenye ebalulekileyo yoluntu, kwaye enembali yothando. Ilifa yayisisenzo sothando esakhiwe nguAdolfo Camarillo kumfazi wakhe, u-Isabella. Indawo yomsitho inokwamkela iindwendwe ezili-1 000 kwaye isetyenziselwe ukutshata, ukubuyela umva, amaqela abucala, kunye neminye iminyhadala yoluntu. Inika iiphakheji zomtshato wendlela ekuyiwa kuyo, kwaye unokukhetha phakathi kweendawo zangaphandle zomtshato zangaphandle, kunye neRed Barn, eyiholo enkulu yesidlo, kunye nendlu yaseVictoria.
Izidiliya kwiSimi Valley, eCalifornia
Izidiliya, ezikwiSimi Valley, zithathwa njengeyona nto ifihlakeleyo kwiVentura County. Indawo yomtshato ophumelele amabhaso ineendawo ezininzi zangaphakathi nangaphandle onokukhetha kuzo, zonke ezizodwa kwaye zintle kakhulu. Igumbi lokujonga iNkanyezi kunye neDesika isethwe phantsi kwesilingi ekhanyayo, ilungele umsitho wobusuku okanye ulwamkelo. Igumbi lokujonga elangeni lihlala iindwendwe ezili-100, kwaye lineembono ezintle zeentaba. Indawo yomsitho woDonga lwaManzi yeyona inkulu kuzo zonke, kwaye inezinto ezihamba ngasemva ezingxangxasi kunye nokukhanya kwecafe bistro. Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi indawo okhetha ukuyisebenzisa, iindwendwe zakho ziya kukhumbula usuku lwakho lomtshato kwiminyaka ezayo. Yindlela ekhethekileyo le ndawo.
NOOR ePasadena, California
Ukuba iindawo zangaphandle aziyonto yakho, NOOR ePasadena inokuba yeyona ndawo ilungileyo kuwe. Le ndawo ye-boutique eqhutywa lusapho ibhetyebhetye kwaye inokuthatha amaqela amakhulu kunye namancinci. I-Sofia Ballroom, esona sithuba sikhulu kubo bonke, bubugcisa obutsha obuphefumlelweyo obuza kulungela iindwendwe ezingama-600. Ukuba umtshato wakho wamaphupha uquka ukuthi 'ndiyayenza' phantsi kweenkwenkwezi, NOOR nokuba negceke elingaphandle elaziwa ngokuba yiNOOR Terrace. Ifanelekile kwabo bafuna useto olusondeleyo.
ILa Casa del Camino eLaguna Beach, eCalifornia
Akukho luhlu lweendawo zomtshato zase-California ese-California ezinokugqitywa ngaphandle kwendawo enye yolwandle. Ukuba uhlala uphupha ngokuba nomtshato waselwandle, iLa Casa del Camino eLaguna Beach kulapho ufuna ukuba khona. ILwandle yaseLaguna yindawo ephambili yeSoCal's epholileyo kunye ne-lay-back vibe. Kwi-La Casa del Camino, ungonwabela ulwandle, uphonononge idolophu, emva koko ubhiyozele uthando lwakho nabahlobo bakho kunye nosapho kwindawo entle. ngeembono ezimangalisayo zolwandlekazi lwePasifiki.
I-Villa Sancti Di Bella Vista eMalibu, eCalifornia
Ukuba ujonge into entle, sukujonga ngaphezulu kweVilla Sancti Di Bella Vista eMalibu, CA. Indawo yabucala ineembono ezimangalisayo zolwandle, indawo yokudanisa, ichibi, igadi ye rose, isidiliya, intendelezo yamanzi, imithombo esixhenxe nokunye. Yindawo ephumelele amabhaso eyenzelwe ukwenza iindwendwe zive ngathi zikwihambo yaseYurophu. Le ndawo yeTuscan ifunwa kakhulu kwaye iindawo zokubeka zigcwaliswa ngokukhawuleza. Ukuba le yindawo yakho, qiniseka ukubhukisha usuku lwakho lomtshato ngokukhawuleza.
I-Loft kwiPine eLong Beach, eCalifornia
indlela yokuphendula izimemo zomtshato
Indawo ephantsi yePine
I-Loft on Pine yakhiwa ngo-1903 kwaye iyindawo ekhethekileyo ye-chic yendawo yedolophu eseLong Beach. Luhlobo lwendawo yomtshato ongaphakathi egqibeleleyo kwabo baxabisa izakhiwo zembali, uyilo olunomdla kunye nefenitshala yeediliya. Iindonga ezindala zezitena kunye nophahla oluhlanganisiweyo olufana nophahla lwenza ukuba kube sisimo esihle somtshato onomxholo. Elona candelo lililo, ngumnyhadala omnye obhukishwe ngexesha. Ke nokuba uneendwendwe ezili-100 okanye ezingama-300, indawo leyo iya kuba yeyakho ngokupheleleyo ukuba uyisebenzise.
I-Rolling Hills Country Club kwiRolling Hills Estates, eCarlifonia
Iklabhu yelizwe iRolling Hills
Iklasi, ephucukileyo, nenobuhle yile nto uya kuyifumana xa ubhukisha umtshato kwiRolling Hills Country Club kwiPalos Verdes Peninsula. Iklabhu yabucala inezinto ezininzi ezahlukileyo zangaphakathi nangaphandle zomnyhadala njengeSkyline Ballroom kunye negumbi leAtrium. Elona candelo lililo kukuba, uya kufumana umbono omangalisayo we-panoramic yesixeko saseLos Angeles.
IBel-Air Bay Club eMalibu, eCalifornia
Iklabhu yeBel-Air Bay
IBel-Air Bay Club ithathwa njengenye yeendawo eziphambili zomtshato eLos Angeles. Indlu yabucala enesimbo esikwiMeditera eMalibu ejonge unxweme olusemazantsi eCalifornia, kwaye inikezela ngeendawo zangaphakathi nangaphandle zomsitho ukuze utshintshe izifungo zakho. Khawufane uzicinge ungqongwe yimithi yesundu isithi 'ndiyayenza' njengoko ilanga litshona ngasemva. Yeyiphi indlela yokuqalisa umtshato wakho. Indawo ngokwayo inembali etyebileyo. Yakhiwa ngee-1920s njengenxalenye yeprojekthi eyazalwa nguAlphonzo Bell, omnye wabaphuhlisi bokuqala baseLos Angeles.
IRetreat eCorona, eCalifornia
I-Retreat ngemitshato ye-Wedgewood
IRetreat nguMtshato weMitshato yindawo yabucala enesitayile saseTuscan esikwiRiverside County. Indawo ihleli kwiinduli ezingasentla kweCorona, CA, kwaye yabucala, inesango, kwaye ijolise ekubeni 'nembasa yeklabhu yodumo.' Ukuba ujonge ukwenza okuninzi kwiRetreat, qiniseka ukubhukisha usuku lwakho lomtshato ngexesha lasentwasahlobo. Yilapho i-poppies eyaziwayo e-California iqhakaza. Ilifa linendawo yokwamkela ngaphandle ongayisebenzisa ukuze ubone kakuhle intlambo yeentyatyambo zasendle.
Ngonaphakade kwaye uhlala uhlala efama eMurrieta, California
Ngonaphakade & Njalo Soloko
Ukuba uza kuthembisa ukuthanda iqabane lakho ngonaphakade kwaye uhlala uhlala njalo, kutheni ungenzi njalo kwi-Forever nakwi-Farm Solar eMurrieta, CA. Oku kuthathwa njengenye yeendawo ezilungileyo zomtshato kwi-Inland Empire, kwaye inothando njengokuba ungathemba ukuba kuya kuba njalo. Indawo yomsitho ihonjiswe ngeentyatyambo ezimhlophe, i-lavender, kunye ne-star jasmine. Indawo yolwamkelo imi ecaleni kwesiseko somgangatho esithathu esijikelezwe ziipikoko ezimhlophe, iigusha kunye neealpaca. Ifama inamagumbi angaphandle egadi anokuhlala iindwendwe ezili-150. Njengebhonasi, iPorsche Speedster Convertible yowe-1957 iyafumaneka ukuze uyisebenzise kwimoto yakho obaleka ngayo.
I-Arrowhead Pine Rose Imitshato eLake Arrowhead, California
I-Arrowhead Pine Rose Cabins Imitshato
Ukuba ufuna ukwenza iindwendwe zakho ngendawo yomtshato abangazange bayibone ngaphambili, unokufuna ukuqwalasela imitshato yeArrowhead Pine Rose ebekwe entliziyweni yeHlathi leSizwe laseSan Bernardino. Indawo ibonelela izibini ngamava 'omtshato wehlathi lendalo', apho uya kuba nomsitho wakho kwilog yesiko kunye ne-gazebo yesebe ebekwe kwindawo yemidlalo yeplanga. Uya kudanisa kwaye ubhiyozele nabahlobo kunye nosapho phantsi kweenkwenkwezi. Indawo ikwabonelela ngendawo yokuhlala wena kunye neendwendwe zakho kwiPine Rose Cabins kubusuku bomsitho. Ukuba wena neqabane lakho niyayithanda indalo, oku kufanelekile ukuba kujongwe.
U-Ikea kunye no-Kanye West we-Creative Director badityanisiwe ukuba ufuna i-Nest esandula ukutshata
Isikhokelo seQela leHamptons Bachelorette sokuCwangcisa impelaveki yakho
UPitch Perfect ka-Anna Camp Ukhumbula isidlo esamenza ukuba awe kwi-Skylar Astin
Ubukhosi beDada uRebecca Robertson Utshata noJohn Reed Loflin kuMtshato waseMexico osondeleyo
USerena Williams Ufumana Ukuphefumlelwa Kwimpahla Yomtshakazi Ngelixa Wayeye Kumtshato
UJason Sudeikis Khange enze nayiphi na into yokuHamba ixesha lokuQala wadibana nesoka elizayo u-Olivia Wilde
UManyano J ’uJosh Cuthbert Uthatha inxaxheba kuChloe Lloyd: Iifoto zesiphakamiso seVenice
I-Supermodel Natalia Vodianova ibandakanyeka kwi-LVMH Heir Antoine Arnault
Ukucinga ngesipho seminyaka eli-16 yeZipho kuye, yena kunye nabo
Isikhokelo sePati sasePuerto Rico Bachelorette sokuCwangcisa impelaveki yakho
Ukuseta kwakhona ilitye lendlalifa
Amagumbi okulala angama-53 amahle (iiNdawo zangaphakathi)
I-YouTube kaMiranda Iingoma zeColleen Ballinger utshata emtshatweni oyimfihlo
UCatherine Zeta-Jones, uMichael Douglas bandwendwela iSindululo seNtaba iminyaka eli-16 kamva
iilokhwe zomtshato zikamakhulu womtshakazi
iiplani zesango lokuhamba ngomthi
Imibono yeminyaka engama-25 yesipho somfazi
Izimvo zesipho seminyaka engama-40
ingaba kulungile ukunxiba ezimnyama emtshatweni
Umculi we-Makeup kaJulianne Hough Usixelela indlela yokuFezekisa i-10-Inyathelo lakhe loMtshato loSuku loBuhle
Iingcamango ezingama-28 zeOfisi encinci yaseKhaya
I-Duke kunye neDuchess yaseSussex kukhenketho e-Australia, eSydney-nge-16 Okt 2018